‘ Messi Iyo Neymar Mar walba Guusha Laguma Halayn Karo …….’ Martino
HomeChampions League‘ Messi Iyo Neymar Mar walba Guusha Laguma Halayn Karo …….’ Martino
Tababaraha kooxda Barcelona ayaa ka hor yimid fikirka dadka qaar ee ah in guusha Barcelona ay ku xidhan tahay hadba sida ay isula jaan qaadaan labada xidig ee Messi iyo Neymar, waxaanu sheegay tababaruhu inaan marwalba laga sugi Karin guul labadan laacib.
Laacibka reer Argentina iyo weeraryahanka ka garab ciyaara ee Braziliyaanka ah ayaa bilowgii ay kooxda sida wadajirka ah ugu ciyaareen, soo bandhigay isla qabsi fiican, kaas oo midho dhal fiican sameeyey, laakiin mudooyinkan u dambeeyey u muuqda inaanay si fiican isula haysanin iyadoo sababta lagu sheegay dhaawacyada soo gaadhay labadan ciyaaryahan.
‘ Messi iyo Neymar ciyaaro badan kamay wada qayb gallin xilli ciyaareedkan , sababtuna waa dhaawacyada soo gaadhay , markii ay sida wadajirka ah u safan jireen waxay isula qabsadeen si aad u fiican, laakiin maalmahan garoonka dhexdiisa si fiican isulama fahmaan.’ayuu tababare Martino ku sheegay shir jaraaid oo uu shallay qabtay.
‘Marwalba guul kama fili karaysid , adoo isleh waa laacibka aduunka , iyo laacibka aduunka ee ku xiga.’
Markii uu intaas yidhi tababaraha Barcelona , wuxuu u dhaafay inuu wax ka yidhaahdo , ciyaarta is araga labaad ee horyaalka Yurub meertadiisa 16 ka ee ay ku qaabilayaan gurigooda Cam Nou , kooxda Manchester City , oo ay kulankii hore gurigooda kaga soo adkaatay 2-0.
‘Berri (manta) waxay ila tahay in Manchester City kooxdeeda isbedel ku soo samayn doonaan. Sergio Aguaro waa nin aad u khatar ah laakiin waxa kaloo ay haystaan ciyaaryahano dhamaantood mudan in laga sii warwaro.
‘Waa inaan ka fikirnaa in 10 ilaa 12 cisho ka hor ciyaartii aanu soo bandhignay ee aan kaga hortagnay Manchester City ahayd mid aad u fiican. Ma garanayo sabab aanaan ciyaar tii la mid ah u soo bandhigi weyno berrina (maanta) waanan hubaa inaanu u ciyaari doono si qurux badan.
‘Waa inaanu ku bedelnaa guuldarada horyaalka, guul Champion ka ah , berrina (maantana) anaga faa’iidada sii haysana.’
Barcelona ayaa Sabtidii guuldaro gurigeeda ku soo gaadhay kadib markii ay ciyaar horyaalka La Liga ka tiran 0-1 kaga adkaatay kooxda Valladolid.
Juve Oo Qaaday Horyaalka Talyaaniga Kadib Guuldaradii Naxdinta Lahayd Ee Roma Qabsatay
Guardiola Oo Ka Baqanaya Real Madrid Ciyaarta Semi Finel-ka Champion-ka